को बन्ला ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री ? यस्ता छन् आकांक्षी - Naya Pusta
को बन्ला ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री ? यस्ता छन् आकांक्षी
Special News, छापाबाट, प्रदेश नम्बर ४, राजनीति
पोखरा, २८ कार्तिक । चुनावको चर्चा परिचर्चामा यतिबेला ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री को होलान् भन्ने बहस सुरु हुँदा प्रादेशिक राजधानी भनिएको कास्कीमा उक्त पदका दाबेदार निस्किएका छैनन् । ११ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेशमा पहिलो चरणमा ६ र दोस्रो चरणमा ५ जिल्लामा हुने चुनावले प्रदेशसभाका लागि ३६ सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । कास्कीमा प्रतिनिधिसभाका ३ र प्रदेशसभाका ६ क्षेत्र छन्।
मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । संसद्को विकास समितिका पूर्वसभापति रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखको दाबेदारका रूपमा हेरिएको थियो । उनलाई वाम गठबन्धनले क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ । जिल्लामा प्रदेशसभामा लड्ने उम्मेदवार अधिकांश नयाँ अनुहार छन्।
मुखियाको ‘मुख्यमन्त्री’ बन्ने धोको
लमजुङ– एमाले पार्टी सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई धेरैले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्लान् भन्ने ठानेका थिए तर उनी प्रदेशसभाको क्षेत्र ‘ख’ बाट उम्मेदवार छन् । पार्टी संगठकको छवि बनाएका उनलाई धेरै अगुवा कार्यकर्ताले जितेको खण्डमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन सक्ने आकलन गरेका छन्।
संविधानसभा चुनाव २०६४ मा प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवारभन्दा ६ हजार मत बढी ल्याएर विजयी भएका उनी २०७० मा भने ६ सय ७२ मततान्तरले कांग्रेस उम्मेदवारबाटै पराजित भएका हुन् । ०४३ यता एमालेका लागि लमजुङ क्षेत्र २ (हाल प्रदेश ख) मा उनी हरेक चुनावका एक्ला उम्मेदवार रहिआएका छन् । वाम गठबन्धनबाट प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बन्ने उद्घोषका साथ चुनावी मैदानमा रहेका उनको जित प्रतिस्पर्धी पनि लोकप्रिय रहेकाले सहज छैन।
उनले भने, ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने हरेक वर्ग, जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीलाई समेटै सुन्दर प्रदेश र सुन्दर लमजुङ बनाउने सपना मसँग छ ।’ उनलाई चुनौती दिन कांग्रेसबाट उम्मेदवार कृष्णप्रसाद कोइराला छन् । जिल्लाकै शालीन नेतामा गनिने कोइराला कसैलाई आरोप प्रत्यारोप नगर्ने नेतामा चिनिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो संगठन छ । विकासमा मेरो योगदान कुनै मन्त्रीभन्दा कम छैन । नागरिकले मलाई नै चुन्नेछन्, यो मेरो विश्वास हो।’
तनहुँमा आधा दर्जन आकांक्षी
दमौली- प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा तनहुँबाट केन्द्रीय तहमा स्थापित प्रमुख दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रमुख दलका नेतादेखि बहालवाला मन्त्रीसम्म उम्मेदवार भएपछि जसले जिते पनि तनहुँकै नेताले प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेमा पार्टीहरूका अगुवा कार्यकर्ता ढुक्क छन्।
क्षेत्र २ प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ छन् । उनलाई एमालेका अगुवा कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्रीको दाबेदार उम्मेदवारका रूपमा हेरेका छन् । ०५३ मा नेविसंघ केन्द्रीय सभापति र २०५८ मा तरुण दलको महासचिव भएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई क्षेत्र १ को ‘क’ बाट प्रदेशसभा उम्मेदवार छन् । मुख्यमन्त्रीको उनी पनि बलिया आकांक्षी मानिन्छन्।
कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल क्षेत्र २ ‘क’ बाट प्रदेशसभाकै उम्मेदवार हुन् । उनी पनि दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन् । पौडेलकी प्रतिस्पर्धी माओवादीकी आशा कोइराला छिन् । उनी पनि वाम गठबन्धनबाट प्रभावशाली उम्मेदवार भएकाले मुख्यमन्त्रीकी आकांक्षी मानिएकी छन्। – कान्तिपुर दैनिकबाट
विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग ११६ रनले पराजित